किन निन्द्रा लाग्दैन ? क्यान्सर पनि हुन सक्छ « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
किन निन्द्रा लाग्दैन ? क्यान्सर पनि हुन सक्छ
हरेक जीवका लागि निन्द्रा आवश्यक छ । निन्द्राले जीवको थकान कम गर्ने र शरीरमा उर्जा बढाउने काम गर्दछ । तर मानवमात्र यस्तो प्राणी हो, जो जानाजान आफ्नो निन्द्राको समय घटाएर आफ्नो उद्देश्यहरु पूरा गन लागिपर्छ । कतिपयमा त निन्द्रा नलाग्ने समस्या भएका कारण निदाउनका लागी औषधिको सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वास्थ्य र दीर्घायू जीवनको लागि वयस्क मानिस ७ देखि ८ घन्टा सुत्नु अनिवार्य छ । उमेर अनुसार निन्द्राको समय घटबढ हुने गर्दछ । तर व्यस्तताका कारणले होस् वा मानसिक तनाव र चिन्ताले वा प्रविधिको विकाशसंगै भित्रिएका स्मार्ट फोन, ल्यापटप चलाउन बानीले मानिसहरु आफ्नो निन्द्रा पुरा गर्दैनन् ।
दैनिक ५ घन्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयघातको खतरा, मानसिक रोग, डिप्रेसन र मोटोपना जस्ता समस्या हुने गर्दछ । दैनिक रातमा ४ घन्टाभन्दा कम सुत्नेहरुमा क्यान्सर रोगको जोखिम समेत हुने गर्दछ ।
यतिमात्र होइन राति निन्द्रा नलाग्नेहरुमा आत्महत्याको विचार आउनेसम्मको अवस्था आउ“छ । तर निन्द्रा पर्याप्त पुगेमा राम्रोसंग पाचन प्रकृया चल्ने, शरीरबाट अनावश्यक तत्व बाहिर फ्याक्ने, हर्मोन उत्पादन गर्ने र रोगसंग लड्ने क्षमतामा वृद्धि समेत गर्दछ । गहिरो निन्द्रा लाग्नु, सपना देख्नु दुबै शरीरका लागी फाइदाजनक छ । यसले मस्तिष्क र शरीरलाई रिचार्ज गर्छ । स्मरण शक्तिलाई बलियो बनाउ“छ ।
रोगसंग लड्ने क्षमता बढाउ“छ र ध्यानलाई सहज बनाउ“छ । त्यसैले दैनिक ७ घण्टाभन्दा बढि सुत्नु अनिवार्य छ । त्यसैले निन्द्रालाई बढी प्राथमिकता दिनुस् । आनन्दले सुत्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति : आश्विन १, २०७७ बिहीबार १२ : ३३ बजे